प्रार्थना, दिइने, प्रार्थना जडान, भाग2(बाइबल # 262 मार्फत प्रार्थना)
पाठ:2कोरिन्थी 9: 7-15
7 हरेक मानिसले आफ्नो हृदयमा शुद्ध गर्दछ, त्यसो गरौं। नम्रता वा आवश्यकताको होइन, किनकि परमेश्वरले एक हर्षित जनावरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
8 र परमेश्वरले तपाईंलाई सबै अनुग्रहको निम्ति प्रशस्त बनाउन सक्नुहुन्छ। कि तपाई, सधै सबै चीजहरुमा सबै योग्यता हुन सक्छ, हरेक राम्रो कामको लागी हुन सक्छ:
9 (जसलाई लेखिएको छ, उसले विदेशमा फैलिएको छ, उहाँले गरिबहरूलाई दिएको छ: उहाँको धार्मिकता सधैँको लागि रहन्छ।
10 त्यसपछि उहाँले आफ्नो खानाको लागि मंत्री रोटीको बिरुवालाई बिरोध गर्नुहुन्छ, र तपाईंको बीउ बोकेर बढ्नुहुन्छ, र तपाईंको धार्मिकताको फल बढाउनुहोस्;)
11 सबै कुरामा सबै कुरामा समृद्धि भएको छ, जसले हामीलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ।
12 यस सेवाको प्रशासनले संतहरूका इच्छाहरूलाई मात्र सप्लाई दिनेछ, तर परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ।
13 यस सेवाको प्रयोग गरेर तिनीहरूले ईश्वरको सुसमाचारको निम्ति आफ्नो पेशात्मक अधीनता र तपाईंको निम्ति उदार वितरण र सबै मानिसहरूका लागि परमेश्वरको महिमा गर्छन्;
14 अनि तपाईंको निम्ति प्रार्थनाको निम्ति, तपाईं लामो समयसम्म तपाईं परमेश्वरको ईश्वरको अनुग्रहको लागि।
15 उहाँको असीमित उपहारको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद।
हामी "सन्देश बाइबल मार्फत प्रार्थना: बाइबिलमा हरेक यात्रामा एक श्रृंखला र उल्टो सन्दर्भ प्रार्थना" शीर्षकको सन्देशहरूको श्रृंखलामा हुनुहुन्छ। यस श्रृंखलाको उद्देश्य बाइबलको परमेश्वरको प्रार्थना गर्न तपाईंलाई प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्न हो। हामीले यीमध्ये प्रत्येकलाई 500 पदहरू र प्रार्थना प्रेरित प्रेरक बाइबलमा उल्लेख गरेका छौँ। अहिलेसम्म, हामीले यस श्रृंखलामा 261 सन्देशहरू पूरा गरेका छौं।
यो सन्देश हो # 262 शीर्षक, द प्रार्थना, दिइयो, प्रार्थना कनेक्शन, भाग 2।
यस खण्डमा हामी पावलले कोरिन्थका विश्वासीहरूलाई यरूशलेममा विश्वासीहरूको आवश्यकतालाई प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिन्छौं। उहाँले आफ्नो मामला बनाउनुहुन्छ, उहाँले चारवटा फाइदाहरू दिनुहुन्छ जुन ख्रीष्टियनहरूले इच्छुक व्यक्तिहरूलाई अरूलाई चाहिने आवश्यकता दिन्छन् - यदि जवाफ दिनुहुन्छ भने चार वटा अर्धचालकहरू। यो एक कुरा हो भन्न को लागी कि तपाइँ कसैको अवस्थाको बारेमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो उनीहरूको पीडा कम गर्न दिने वा सेवा गरेर आफ्नो चिन्ता देखाउन अर्को कुरा हो। मलाई यकीन छ कि हेराफरी हार्वे र हाउभाउमा इम्माको पीडितहरूले हाम्रो प्रार्थनाको प्रशंसा गर्छन, तर उनीहरूले हामीले दिईने पैसा र हामी पठाउनु पर्ने रकमहरूको सराहना गर्छौं। र, एक संयुक्त राज्य अमरीका आज रिपोर्टको रूपमा यो हप्ता उल्लेख गरिएको छ, यो ईसाई एजेन्सीहरू छन् जुन भूमिगत आपदा राहतको थोक प्रदान गर्दछ।
यरूशलेमको ईसाईहरूसँग सम्झौता गर्न पर्याप्त तूफान थिएनन्, तर तिनीहरू चरम गरिबीको सामना गरिरहेका थिए किनकि तिनीहरू ख्रीष्टको विश्वासको आधारमा यहूदी धर्मको केन्द्रमा भएको कारण ठूलो मात्रामा समाजबाट काटिएका थिए। पावलले कोरिन्थीहरूलाई यरूशलेमको मसीहीहरूको बीचमा कमीको आपूर्ति गर्न चाहन्थे। इन्टरभर्सिटी प्रेस कमेन्टरीले टिप्पणी गर्छ कि "कोरिन्थीहरूको प्रस्तावले प्रदान गरेको विशेष सहायताले यहूदिया ख्रीष्टियनहरूको आवश्यकतालाई आपूर्ति गर्न भनेको हो। शब्दले प्रयोग गरेको आधारभूत आवश्यकताहरूको कमी वा कमीको संकेत गर्दछ। प्रथम शताब्दीमा यो भोजन, कपडा र आश्रय। त्यसैले कोरिन्थीहरूको योगदानले प्रदान गरेको मद्दत आवश्यक छ, लक्जरी छैन। "
यदि कोरिन्थीहरूले यरूशलेममा विश्वासीहरूलाई दिए, पावलले तिनीहरूलाई यसो भने कि तिनीहरूले "सन्तानहरूको चाहना" आपूर्ति गर्नेछन्। यो आवश्यकमा तीहरूलाई निःशुल्क रूपमा दिने पहिलो आशिष् हो। "इच्छा" शब्द भनेको "कमी" भनेको हो, "कोरिन्थी चर्चबाट मौद्रिक प्रस्ताव" ले यरूशलेममा चर्चको प्रावधानहरूमा अवस्थित छेदहरू भरिएको थियो। उनीहरूले मण्डलीको कमीलाई प्रदान गर्थे। तर पावलले पनि आवश्यक आशिष् चाहिन्छ कि आवश्यकता को लागी दिने को लागी पालन को लागी।
पद 12 मा जारी रहन्छ, उनी भन्छन् कि तिनीहरूको वरदान "प्रार्थनाको माध्यमबाट परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद" प्रशस्त हुनेछ "यो खाँचोमा परेकाहरूलाई प्रदान गर्ने दोस्रो आशिष् हो। अर्को शब्दमा, उनीहरूले यरूशलेमको मण्डलीलाई उपहार दिंदा पनि उनीहरूको उद्देश्यभन्दा बढि बढ्दै जान्छ र प्रार्थनामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने वा ओभरफ्लोको कारण हुनेछ। बाइबलले भन्छ "परमेश्वरले [बाकी [उहाँका उपस्थितिहरू] उहाँका जनहरूको प्रशंसा" हुनुहुन्छ। " कोरिन्थी चर्चले दिउँसो यरूशलेममा मसीहीहरूलाई आफ्नो आवश्यकताको लागि प्रार्थना गरिरहनुको कारणले गर्दा उनीहरूको आवश्यकताहरुका लागि "धेरै" अति धेरै धन्यबाद संग प्रार्थना गर्न। तिनीहरू परमेश्वरलाई "धन्यवाद" भन्नेछन्।
के तपाईंले हाललाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभएको हो कसैको कारण हो? के तपाईं कारण अनुरोध प्रार्थनाको सट्टा प्रशंसा रिपोर्ट संग चर्चमा आएको कारण हो? यदि होइन भने, आज किन आजको स्वतन्त्रता सुरु गर्न सुरु हुँदैन? अरूलाई आवश्यक पर्दछ। धन्यबाद हुनुको कारण दिनुहोस्।
हामी यो रोबर्ट मरेय को एक नै मनोभाव साझा गर्न सक्छौं जसले यी शब्दहरू लेखे:
हे भगवान, तपाईं हर्षित दासलाई प्रेम गर्नुहुन्छ,
खुल्ला हृदय र हातको साथ कसले
निर्मल रूपमा, नदीको रूपमा आशिष् दिन्छ
त्यो सबै देशलाई ताज़ा गर्दछ।
त्यसपछि हामीलाई दिने अनुग्रह दिनुहोस्
एक आत्मा ठूलो र मुक्त संग,
त्यो हाम्रो जीवन र हाम्रो सबै जीवित
हामी तपाईंलाई सताउन सक्छौं।
अब, तपाईं आज हाम्रो साथ हुनुहुन्छ भने, र तपाईं प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईंको मुक्तिदाताको रूपमा थाहा छैन, तपाईंको पहिलो प्रार्थना हामीले पापीको प्रार्थना भन्छौं। पहिलो, कृपया बुझ्नुस् कि तपाईं पापी हुनुहुन्छ, जस्तै म म हुँ, र तपाईंले परमेश्वरको नियमहरू भोग्नु भएको छ। बाइबलले रोमी 3:23 मा भनिएको छ: "सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाको छोरो।"
अब यो खराब समाचार छ, तर यहाँ सुसमाचार छ। येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 3:16 मा यसो भन्नुभयो: "परमेश्वरको निम्ति यति धेरै प्रेम गर्थ्यो कि उहाँले आफ्नो मात्र पुत्र पुत्र दिनुभयो, जसले जसले उहाँलाई विश्वास गर्दछ, नष्ट हुँदैन, तर अनन्त जीवन छ।"
केवल तपाईंको विश्वासमा विश्वास गर्नुहोस् कि येशू ख्रीष्ट तपाईंका पापहरूका निम्ति मर्नुभयो, दफन गरियो, र तपाईंहरूका लागि ईश्वरमा बाँच्न सक्नुको निम्ति परमेश्वरको शक्तिले मरेकाहरू मर्नुभयो। प्रार्थना गर र उहाँलाई आज आफ्नो हृदयमा आउन सोध्नुहोस्, र उहाँले हुनेछ।
रोमी 10:9र 13 ले भन्दछ, "यदि तिमी आफ्नो मुख प्रभु प्रभुसित स्वीकार गर्छौ, र तिम्रो हृदयमा विश्वास गर्नेछु कि परमेश्वरले उसलाई मरेकाहरूबाट उठाउनुभएको छ, तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ ... जसको नामले बोलाइनेछ प्रभुको उद्धार हुनेछ। "
यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईंको पापको लागि क्रूसमा येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, मरेका थिए र मृतहरूबाट गुलाब, र तपाईं आज नै आफ्नो मुक्तिको लागि विश्वास गर्न चाहानुहुन्छ, कृपया यो सरल प्रार्थनाको साथ प्रार्थना गर्नुहोस्: पवित्र पिता, परमेश्वर पापी हुँ र मैले मेरो जीवनमा केही खराब काम गरे। येशू ख्रीष्टको निम्ति, कृपया मलाई मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्। म अब मेरो सम्पूर्ण हृदयमा विश्वास गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति मर्नुभयो, दफन गरियो र फेरि उठ्नुभयो। प्रभु येशू, कृपया मेरो हृदयमा आउनुहोस् र मेरो प्राण बचाउनुहोस् र आज मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्। एमेन।
यदि तपाईंले मात्र येशू ख्रीष्टलाई तपाईंको मुक्तिदाताको रूपमा भरोसा गर्नुभयो भने तपाईंले प्रार्थना गर्नुभयो र तपाईंले आफ्नो हृदयको अर्थ बुझाउनुभयो, म तपाईंलाई परमेश्वरको वचनमा आधारित बताउँछु, तपाईं अब नरकबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ र तपाईं स्वर्गमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको परिवारमा स्वागत छ! बधाई छ येशू ख्रीष्टलाई तपाईंको प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा भरोसा गर्नुहोस्। तपाईंले जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अधिक जानकारीको लागि तपाईं ख्रीष्टमा आफ्नो नयाँ विश्वासमा बढ्न मद्दतको लागि, सुसमाचार लाइट सोसायटीमा जानुहोस् र "तपाईं दरवाजा मार्फत के गर्न पछि के गर्नु पर्छ" पढ्नुहोस्। यशैया ख्रीष्टले यूहन्ना 10:9मा यसो भने, "म ढोका हुँ, मेरो द्वारा यदि कुनै मानिसले भित्र प्रवेश गर्दछ, उसले मुक्ति पाउनेछ, र बाहिर र बाहिर जान्छ, र चरा फेला पार्छ।"